Ferrovit Myanmar Donates Thousands of Medicine Boxes to Chit Thu Wai’s Khit Thit Foundation to Support Needy People – LYCA COMMUNICATIONS
Ferrovit Myanmar Donates Thousands of Medicine Boxes to Chit Thu Wai’s Khit Thit Foundation to Support Needy People
Date: June 16, 2020Author: Rahul0Comments
Yangon – June 16, 2020 – Ferrovit,aleading iron supplement brand in the market by Mega Lifesciences Limited, announces today that it has donated thousands of medical boxes to the local Khit Thit Foundation, which is founded byawell-known celebrity couple, Chit Thu Wai and Lin Lin.
According to Ferrovit Myanmar, the total 3,000 boxes of Ferrovit will donate from Khit Thit Foundation to National Health Lab, Clean Yangon, which supports the needy and the healthcare workers who are on the front line during the times of Covid-19 pandemic.
Mega Lifesciences Limited stated this is an important time for people to have good blood circulation and to protect themselves from viral infections since iron playsamajor role in the transport of oxygen to the blood.
Iron-deficiency anemia is the most common anemia both men and women in Myanmar are suffering.4out of 10 people in the world suffer from anemia. Therefore, taking Ferrovit can fill up the blood volume and help boost your immune system.
Mega Lifesciences Limited also stated that Chit Thu Wai, who is alsoabrand ambassador of Ferrovit, has been generously supporting the needy people through her Khit Thit Foundation in different areas across Yangon during the times of Covid-19.
“As an afford to fight against Covid-19 continues, our foundation has been trying our best to support the shortages of medical supplies and essential foods to many hospitals, households and needy people across Yangon, especially to improve their health and well-being during this crisis. Thanks to Mega Lifesciences for donating supplies through our foundation during the time of needs,” Chit Thu Wai said at the handover ceremony that took place today.
Anemia isacommon health problem among women of all ages with common symptoms such as fatigue, headache, breathlessness, loss of energy.
For more information, please visit Ferrovit Myanmar’s Facebook pagewww.facebook.com/ferrovitmyanmar
ရန်ကုန်၊ ဇွန်လ (၁၆)ရက်၊ ၂၀၂၀ခုနှစ် – Mega Lifesciencesမှထိပ်တန်းသံဓာတ်အားဖြည့်ဆေး အမှတ်တံဆိပ်ဖြစ်သည့်Ferrovit Myanmar သည်ထောင်ပေါင်းများစွာသောFerrovit ဆေးဗူးများကို နာမည်ကျော်အနုပညာစုံတွဲဖြစ်သည့်ချစ်သုဝေနှင့်လင်းလင်းတို့ထူထောင်ထားသည့်ခေတ်သစ်ဖောင်ဒေးရှင်းသို့လှူဒါန်းလိုက်ကြောင်းယနေ့ထုတ်ပြန်ကြေငြာသည်။
Ferrovit Myanmar သည် ဆေးဗူးပေါင်း (၃,၀၀၀)အား ခေတ်သစ်ဖောင်ဒေးရှင်းမှတဆင့် ဗဟိုကျန်းမာရေး ဓာတ်ခွဲဌာန၊Covid-19 ကို ရှေ့တန်းမှကာကွယ်ကုသပေးနေသော ဆရာဝန်များနှင့် ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများနှင့်Clean Yangon ပရဟိတအဖွဲ့မှ ကူညီပေးနေသော ဆင်းရဲနွမ်းပါးပြည်သူ များအားလည်းကောင်း စသည်ဖြင့် လိုအပ်သောသူများအားလုံးကို ထောက်ပံ့ပေးသွားရန်ရည်ရွယ်ကာ လှူဒါန်းကြောင်း သိရှိရသည်။
ယခုအချိန်အခါမှာပြည်သူတို့၏ ကိုယ်ခံစွမ်းအားကောင်းနေစေဖို့ရန်ကိုယ်တွင်းသွေးပမာဏကောင်းမွန်ပြီးမိမိကိုယ်ကိုဗိုင်းရပ်စ်ကူးစပ်မှုမှ ကာကွယ်နိုင်ရန်အတွက်အရေးကြီးသောအချိန်ဖြစ် ပါသည်။သံဓာတ်သည် သွေးတွင်းအောက်ဆီဂျင်ကိုသယ်ဆောင်ပေးသည့်အဓိက အခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင် သောကြောင့်လူတိုင်းအတွက် အလွန်အရေးကြီးပါသည်။သံဓာတ်ချို့တဲ့ခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပေါ်သောသွေးအားနည်းရောဂါသည်မြန်မာနိုင်ငံရှိအမျိုးသား၊အမျိုးသမီးများအကြားပုံမှန်အဖြစ်များသောသွေးအားနည်းရောဂါဖြစ်ပါသည်။ကမ္ဘာပေါ်တွင်လူ၁၀ယောက်တွင်၄ယောက်သည်သွေးအားနည်း ရောဂါခံစားနေရပါသည်။ထို့ကြောင့်Ferrovitကိုသောက်သုံးခြင်းအားဖြင့်သွေးပမာဏကိုဖြည့်တင်းပေးနိုင်ပြီးကိုယ်ခံစွမ်းအားကိုလည်းမြှင့်တင်ရန် အထောက်အကူပြုပါသည်။
ဆက်လက်ပြီး Mega Lifesciences Limitedမှ Ferrovitအမှတ်တံဆိပ်၏ သံတမန်ဖြစ်သူ သရုပ်ဆောင်ချစ်သုဝေ၏ ခေတ်သစ်ဖောင်ဒေးရှင်းမှတဆင့် Covid-19 ကာလအတွင်း ရန်ကုန်မြို့ နေရာဒေသအသီးသီးရှိ ဆင်ရဲနွမ်းပါးပြည်သူများကို ရက်ရက်ရောရော ထောက်ပံ့ကူညီပေး နေသောကြောင့် သူမ၏ ဖောင်ဒေးရှင်းမှတဆင့်လှူဒါန်းရခြင်းဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားသည်။
“Covid-19ကာလအတွင်း တိုက်ဖျက်ရေးဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေချိန်မှာ ကျွန်မတို့ဖောင်ဒေးရှင်း ကနေ ရန်ကုန်မြို့ နေရာဒေသအသီးသီးက ဆေးရုံတွေ၊ အိမ်ထောင်စုတွေနဲ့ လိုအပ်နေသူတွေအတွက် အထူးသဖြင့်အခုလိုအကျပ်အတည်းကာလမှာ ပြည်သူတို့ရဲ့ကျန်းမာရေးနဲ့ စားဝတ်နေရေး အဆင်ပြေဖို့ အဓိကလိုအပ်ချက်တွေဖြစ်တဲ့ ဆေးဝါးတွေ၊ အစားအစာတွေကို တတ်နိုင်သလောက် ကူညီထောက်ပံ့ ပေးနေပါတယ်။ အခုလိုလိုအပ်ချက်ရှိနေစဉ်ကာလမှာ ကျွန်မတို့ဖောင်ဒေးရှင်းကနေတဆင့် ကူညီ ထောက်ပံ့ပေးတဲ့အတွက် Mega Lifesciences ကိုလည်း ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်”ဟု ချစ်သုဝေက ပြောကြားသည်။
သွေးအားနည်းရောဂါသည်အမျိုးသမီးများကြားအဓိကဖြစ်ပွားကာအသက်အရွယ်မရွေးဖြစ်ပေါ် သည့်ကျန်းမာရေးပြဿနာဖြစ်ပြီးမောပန်းနွမ်းနယ်ခြင်း၊ခေါင်းမူးခြင်း၊အားအင်ကုန်ခမ်းခြင်းနှင့်အသက်ရှူ မဝခြင်း စသည့်လက္ခဏာာများခံစားရပါသည်။
Ferrovit Myanmar အကြောင်းနှင့် လှုပ်ရှားမှုများကို ပိုမိုသိရှိလိုပါကFacebook စာမျက်နှာဖြစ်သော http://www.facebook.com/ferrovitmyanmar/ တွင်ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။
AnemiaDonationFerrovitFerrovit MyanmarIron DeficiencyLycaLyca CommunicationsLyca Company LimitedMega LifesciencesMyanmarPandemicPRPress ReleasePublic RelationsTeam LycaYangon
Previous Previous post: Suzuki (Myanmar) Motor Co., Ltd Introduces Best-selling Sedan Suzuki Ciaz Upgraded Model to Myanmar Market
Next Next post: Mega Lifesciences Supports Thousands of Nat C Bottles to Frontline Health Workers who fight against Covid-19 Pandemic